Dipasha BC (दिपाशा बिसी) Hot Model
Topic: Dipasha BC (दिपाशा बिसी) Hot Model
Author Topic: Dipasha BC (दिपाशा बिसी) Hot Model (Read 18547 times)
मलाई लट्ठ बनाउने अहिलेसम्म भेटेकी छैन : दिपाशा बीसी
पश्चिम नेपालको सुन्दर सहर सुर्खेतकी दिपाशा बीसी विगत पाँच वर्षदेखि अभिनय क्षेत्रमा सक्रिय छिन्। पाँच वर्षअघि नेपालगन्जमा सम्पन्न गोपीकृष्ण टिभी फिल्मीको रियालिटी शो ‘को बन्छ कलाकार’ मा छनौट भएपछि दिपाशाको काठमाडौं यात्रा तय भएको थियो। २० वर्षीय दिपाशा उक्त प्रतियोगिताको उत्कृष्ट २० सम्म पुगेर बाहिरिन्, तर त्यस क्रममा उनका लागि म्युजिक भिडियो तथा चलचित्रको ढोका खुलिसकेको थियो। द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गीले उनको अभिनय प्रतिभा चिनेकाले दिपाशा सोभित बस्नेतको चलचित्र ‘दुलही रानी’ मार्फत अभिनय क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्।
सुर्खेतमै छँदा दर्जनौं सडक नाटकमा अभिनय गरिसकेकी दिपाशालाई पहिलो चलचित्रमा अभिनय गाह्राे भएन तर भूमिका सानो भएकाले उनी दर्शकको नजरमा परिनन्। ५ फिट ५ इन्च अग्ली दिपाशाले अघिल्लो वर्ष प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘झेली’ बाट नायिकाका रूपमा डेब्यु गरिन्। त्यसयता उनले ‘चाल’, ‘गहिराइ’ तथा ‘ओएमजी’ शीर्षकका चलचित्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छिन्। ‘प्रपोज’ उनले अभिनय गर्ने नयाँ चलचित्र हो।
गायक प्रमोद खरेलसहित थुप्रै गायक-गायिकाका ६० भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी दिपाशा फुर्सदमा गीत रचना गर्छिन्। उनले रचना गरेको एउटा युगल गीत प्रमोद खरेल र अन्जु पन्तले गाएका छन्, जसको म्युजिक भिडियो निर्माण हुँदैछ।
दिपाशालाई आफ्नो शारीरिक बनावटभन्दा मुस्कान बढी मन पर्छ। ‘पहिलो भेटमै मेरो मुस्कानबाट लट्ठ हुनेहरू धेरै देखेकी छु, दिपाशाले रोमान्टिक मुडमा भनिन्— ‘तर मलाई लट्ठ बनाउने अहिलेसम्म भेटेकी छैन।’ चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोको अभिनयलाई निरन्तरता दिइरहेकी विपाशा पछिल्लो समय महोत्सवहरूमा नृत्य प्रदर्शन गरिरहेकी छिन्। सारीमा सेक्सी देखिने दिपाशालाई फेसबुकमा भने ‘जलपरी दिपाशा’ नामबाट फेला पार्न सकिन्छ।
deepasha bc.jpg (100.19 kB, 1058x1058 - viewed 812 times.)
deepasha.jpg (566.9 kB, 1360x2048 - viewed 869 times.)
Re: Dipasha BC (दिपाशा बिसी) Hot Model
deepasha bc sexy belly button.jpg (140.95 kB, 720x960 - viewed 1374 times.)
फिल्ममा कथाले मागे भन्दा बढी निर्माता निर्देशकहरु नंग्याउछन् : दिपाशा
अहिले नेपाली रंग क्षेत्रका म्युजिक भिडियो र नयाँ फिल्महरुमा अभिनय गरीरहेकी मोडल तथा अभिनेत्री दिपाशा विसी निकै व्यस्त छिन् । सुर्खेतबाट काठमाण्डौँ आउदा कलंकी झर्दा नै संघर्षको दूनियामा एक्ला एक्लै भिड्दै आएकी भन्ने दिपाशा विसी पछिल्लो समय नेपालकै चर्चित र नम्बर १ अभिनेत्री बन्ने होडमा छिन् ।
सुखमा हजार साथी भएपनि दुखको बेला आशु पुछ्ने कोही हुदैन भन्ने यतार्थलाई राम्रोसंग भोगेकी र त्यसलाई पछयाइरहेकी दिपाशामा आफुमा भएको प्रतिभालाई प्रस्तुत गर्ने क्षमता अब्बल छ । उनीद्धारा अभिनित झन्डै सयौँको हाराहारीमा रहेका म्युजिक भिडियो सर्ट फिल्म, थेयटर पछि चलचित्र चाल यही जेठमा रिलिजको तयारीमा छ । चलचित्रको छायांकन सकेर हाल डविङ भइरहेको बेला सुन्दरी र अभिनयमा पोख्त अभिनेत्री दिपाशासंग एक्टर नेपालका लागी विष्णु विवेक ले गर्नुभएको कुराकानी :
 कत्तिको व्यस्तता छ पछिल्लो समय ?
व्यस्त छु । म्युजिक भिडियो, फिल्मको शुटिङ्मा निकै व्यस्त छु । त्यसअलबा विभिन्न महोत्सव, कार्यक्रमहरुमा जानुपर्ने । अहिले त झन समय निकाल्नै गा्रहो भइरहेको छ ।
 यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको क्षणलाई सम्झिदा ?
शुरुमा निकै गाह्रो भो । अभिनय, त्यसलाई सबैमाझ देखाउछु भन्दा धेरै पटक लडनुपरेको छ । शुरुमा सुर्खेतबाट काठमाण्डौँ आउदा कलंकीमा झर्दा नै अलपत्र परे । २÷३ घण्टा रोए । सुखमा हजार मान्छे हुन्छन् तर दुख पर्दा आशु पुछ्ने कोही हुदैन् । यो मैले धेरैपटक रियलाइज गरेकी छु । अहिले पनि आफुलाई कलंकीमा बसबाट झर्दाखेरीको त्यो क्षणलाई मिस गरीरहन्छु ।dipasha bc 3
 त्यतिबेला यो ठाउँसम्म आइपुग्छु जस्तो लागेको थियो ?
हो । एक्चुल्ली । मैले त्यतिबेला आज यो ठाउँमा हुन्छु भनेर त सोचिन् । तर त्यतिबेला मेलै आफनो सपनालाई निकै कडा मेहनतका रुपमा लिए । तर विस्तारै संघर्ष गर्दै जादा पुगिन्छ भन्ने लागेको थियो । आज त्यो भइरहेको छ । त्यसैले सोचेजस्तो नभएपनि सपना सजाउदा एक दिन पुरा हुन्छ । मलाई त्यो विश्वास छ । विश्वासले नै आज यहासम्म ल्याएको छ ।
 त्यतिबेला र अहिलेको अभिनय कत्तिको संघर्षपूर्ण छ ?
निकै संघर्षपूर्ण छ । पहिले थोरै कलाकार, थोरै फिल्म, थोरै दुख । तर अहिले धेरै भीड छ । ठुलो जमात छ । अहिले सुन्दरता भएर मात्र पुग्दैन सबै चाहिन्छ । अभिनयमा त पोख्त हुनैप¥यो त्योसंगै आर्थिक सामाजिक पक्षसंग पनि संघर्ष भर पर्छ । त्यसैलाई पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समयका कलाकारहरु बढी सघर्ष गरिरहेका छन् ।
 अहिलेको अभिनेत्रीहरुमा रेखा थापा र करिश्मा मानन्धर एकदमै हाइटमा छन् । कुनै दिन त्यो हाइट पाउछु जस्तो लाग्छ ?
त्यो संघर्षमा भर पर्छ । म भोली रेखा र करिश्मा बन्छु त भन्दिन । यदि नेपाली फिल्मका ब्राण्डेड फिल्ममा अभिनय गर्ने अवसर आयो भने सायद विस्तारै त्यो हाइटमा लम्किन्छु होला जस्तो होला । तर म त्यो भन्दा पनि सदाबहार अभिनेत्री बनेर नेपाली फिल्म क्षेत्रमा रमाउन चाहन्छु ।
 अहिले फिल्ममा अभिनेत्रीलाई उनीहरुसंग कम्प्रोमाइज गरेर मात्रै लिइन्छ भनिन्छ, हो ?
हो । अहिले नेपाली फिल्म तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा सजिलो छ्रैन् । यहाँ बाहिरबाट हेर्दा निकै रोचक, रमाइलो, सपनाको शहर जस्तो लागेपनि त्यो भित्र छैन् । यहाँ कथा र परिस्थिती भन्दा पनि अनावश्यक कम्प्रोमाइज ले गर्दा विग्रेको छ । काममा त अभिनेत्री मात्र होइन सबैले कम्प्रोमाइज गर्छन । पैसामा पनि कम्प्रोमाइज गरिन्छ । तर , तर मा आएर सबै कुरा अड्किन्छ । भन्छन् यहाँ कम्प्रोमाइज नगरेर केही पनि पाइदैन् ।
dipasha bc 1 कस्तो कम्प्रोमाइज ?
कम्प्रोमाइज भन्नाले यहाँ अहिलेका नयाँ निर्माता निर्देशकहरुलाई कथा, स्क्रिप्टले मागेको सिन होइन । उनीहरुले जवर्जस्ती नंग्याउछन् । उनीहरुका लागी भएपनि अधिकांश अभिनेत्रीहरु नागिंनुपर्छ । यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा विकृतिको रुपमा रहेको के छ भने यहाँ नायिकाहरुलाई नंग्याएर फिल्म चल्छ भन्ने छ, सेक्सी, हट अवतार देखाएर, बेड सिन दिएर । वास्तवमा त्यो होइन । कस्तो र कतिसम्म दिएर फिल्म चल्ने कथा, अवस्था, परिस्थिती अनि समसामयिक अभिनयले हो । त्यो गर्न जरुरी छ । ता की कम्प्रोमाइजका नाममा आफ्नो स्वार्थ र फिल्मी इन्टस्ट्री नै धरापमा पार्ने नहोस ।
 अन्य व्यस्तता के छ नयाँ नौलो ?
नयाँ भनेको म चाडै म एउटा गीतलाई बजारमा ल्याउदैछु । खोज्यौ धेरै रुवाउनलाई तर पनि हासिदिन्छु, चाहिदैन झुटो माया अब एक्लेै बाचिदिन्छु । प्रमोद खरेल र अन्जु पन्तको आवाजमा नयाँ बर्षको अवसर पारेर मेरो लिरिक्समा रहेको यो गीत बजारमा आउदैछ । यसलाई हरि बिष्ट दाईले संगीत दिनुभएको छ । आशा छ यसले केही नयाँ आयाम दिनेछ ।
 तपाई यहाँसम्म आउदा फेमली सर्पोट कत्तिको पाउनु भयो ?
मलाई ड्याडीले त त्यति सर्पोट गर्नुृभएन । त्यतिबेलाको पिरियड नै त्यस्तै थियो । तर मम्मीले निकै सर्पोट गर्नुभयो । म कुनै कार्यक्रममा नृत्य गर्न जादा, सिक्न जादा खाना पनि लुकाई लुकाई दिनुहुन्थ्यो । सायद उहाँको त्यो साथले आज म यहासम्म आएको हूँ ।
 अहिलेको समयमा आफुलाई फिट र मेन्टेन गरिरहेको नेपाली नायक ?
राजेश हमाल । उहाँको क्रेज अझै पनि घटेको छैन् । हामी कलाकारमा त्यो हुनैपर्छ ।
 तपाईको नजरमा पछिल्लो समय व्यस्त र चल्तीको नायिका को हुन् ?
प्रियंका कार्की । उहाँ सबै कुरामा फिट हुनुहुन्छ ।
 अनि चल्तीको व्यस्त नायक ?
चल्तीको नायक आर्यन सिग्देल । आर्यन दाई प्राय सबै फिल्ममा वेस्ट हुनुहुन्छ ।
 सुर्खेतलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
हा्…हा….हा… । हो सुर्खेत मैले धेरै संघष गरेको ठाउँ हो । अहिले पनि कतिपय सुर्खेती अग्रजले गर्दा म यहाँसम्म छु । विशेषगरी बागीना समूह, न्यृत्य निर्देशक सर कुलमान नेपाली, चन्द्र मन्दिर लगायत लाई सम्झिन चाहन्छु । अनि सप्तरंगी आर्टस प्रोडक्सन लाई पनि सम्झिन्छु । मलाई सुर्खेतका सबैले सुर्खेती चेली भनेर माया गर्छन । धेरै खुशी लाग्छ ।
 अनि अहिले यो क्षेत्रमा आउनेहरुको भीड निकै ठूलो छ ? उहाहरुलाई सुझाव के तपाईको ?
हो । अहिले दैनिक काठमाण्डौ बसर्पाकमा आउनेहरुमध्ये ५ सय जति त म नेपालको टप कलाकार, मोडेल, सेलिब्रेटी बनेर आउछन् । तर वास्तवमा तपाईले सोचेजस्तो सजिलो छ्रैन् । तपाईको सपना यहाँ क्षणभरमै टुक्रिन सक्छ । चुडिन सक्छ । त्यसैलै पहिले त तपाई वास्तविक लक्ष्य के हो ? कत्तिको आत्म विश्वास छ । त्यसलाई क्लियर गरेर मात्रै आउनुस । कसैले भनेकै भरमा रहर लागेको भरमा नआउनुस । भोली फेरी कोही विचैमा छाडेर विदेश, कोही कता कोही कता । त्यसैले सबै कुरा राम्रो छ भने मात्रै आउनुस भन्छु ।
 सपना के छ अबको ?
सपना । एउटा काठमाण्डौमा सानो घर बनाउने छ । अनि एउटा कार चढ्ने छ । आशा छ अबको १० बर्षमा यी दुई वटै सपनालाई पाइसक्छु, जस्तो लाग्छ ।
 अहिलेसम्म कतिवटा जति गीतहरुमा मोडलिङ् गर्नु भयो ?
अहिलेसम्म लगभग ८० क्रस भयो । झन्डै सय पूग्न थाल्यो होला । मैले बढी लोकदोहोरी गीतहरुमा मोडलिङ गरे । त्यत्तिकै मात्रामा आधुनिक तीज गीत लगायतपनि अभिनय गरे ।
 सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
छु । एकदमै हिजो एकठाउमा थिए । आज यति ठुलो नाम पाएकी छु । खुसी नै छु ।
 चालमा विशेष के छ……..?
चालमा विशेष त एउटा नारीको अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ । हरेक कुरामा पछाडी भन्दा पनि उनीहरु भित्रको क्षमतालाई उजागर गर्न विष्फोट गराउने चालको उदेश्य हो ।
 कस्तो छ अपेक्षा फिल्मबाट ?
राम्रो छ । मलाई विश्वास छ चालले मेरो अभिनय क्षमतालाई पनि केही चलायमान बनाउने छ । जेठमा रिलिज हुदैछ । समग्रमा म आत्मविश्वासी छु । फिल्मप्रति ।
 अन्त्यमा ?
अन्तिममा, मैले पछिल्लो समय ठुलो मेहनतका साथ अभिनय गरेको फिल्म आउदैछ । सबैले हेरिदिनुहोला । म विशेष गरी यतिबेला मम्मीलाई सम्झिन चाहन्छु । उहाले गर्दा आज म यहाँ छु । अनि मध्यपश्चिमका हरेक कलाकारहरुलाई सर्पोट गर्ने हरि बिष्ट दाईलाई पनि सम्झिन चाहन्छु । अनि आजसम्म सहयोग, सर्पोट साथ दिने सबैलाई सम्झिन चाहन्छु ।
काठमाडौंमा एउटा घर बनाउने र फिल्मी क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गराउने योजना छ : मोडल दिपाशा बि.सी.
सानैदेखि नृत्य र अभिनयमा रूचि राख्ने सुर्खेती चेली दिपाशा बिसी फिल्म र म्युजिक भिडियोमा व्यस्त छिन् । फिल्म ‘दुलही रानी’बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरी उनले ‘झेली’, ‘ओ माइ गड’ ‘चाल’ लगायतका फिल्म र थुपै्र म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन् । आफ्नै क्षमता, मेहेनत र लगनशिलताले गर्दा सफलतातर्फ लम्किरहेको बताउँने उनी सफल अभिनेत्री बन्ने र आफ्नै आम्दानीले काठमाडांैमा घर बनाउने योजनामा छिन् । प्रस्तुत छ, गीता थापाले गरेको कुराकानी
‘चाल’ मूभिको काम भर्खरै सकिएको छ । त्यसैको प्रदर्शनीको पखाई र म्युजिक भिडियोमा व्यस्त छु ।
फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको कति भयो ?
म चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेको करिब पाँच वर्ष जति भयो ।
फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कतिको सजिलो छ ? कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
पक्कै पनि हेर्दा जति सजिलो जस्तो देखिन्छ त्यति नै गाह्रो छ चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्न । म चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा २०६४ सालमा ‘को बन्छ कलाकार’मा अडिसन दिनकोे लागि काठमाडौं गएको थिएँ । त्यतिबेला द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्की र नायिका निशा अधिकारी पनि आउनुभएको रहेछ, उहाँहरूले मेरो अभिनय देखेर राम्रो मान्नु भएछ । त्यसपछि राजेन्द्र दाईले मलाई फिल्म ‘दुलही रानी’ मा सानो ‘रोल’ दिनुभयो त्यहीबाट मेरो फिल्म यात्रा सुरू भयो । र, अहिले यहाँसम्म आइपुगेकी छु ।
पहिलो म्युजिक भिडियोमा काम गर्नुभयो कि चलचित्रमा ?
मेरो कलाकारिता फिल्म क्षेत्रबाट शुरू भएको हो । सडक नाटक खेल्दै अहिले फिल्म क्षेत्रसम्म आइपुगेकी छु ।
कलाकारिता क्षेत्रमा महिलाहरूलाई काम गर्न कतिको सजिलो छ ?
एकदमै गाह्रो छ । एउटा छोरी मान्छे, जो घरबाट बाहिर निस्किन अनुमति माग्नुपर्छ । घर सँगसँगै समाजले अनेक थरी कुरा काट्ने गर्छन् । घरदेखि बाहिर निस्किदा त ‘फलानोको छोरीले त यस्तो गर्छे रे, उस्तो गर्छे रे’ भनेर कुरा काट्ने गर्छन् । झन् कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जो कोही महिलालाई पनि घरपरिवारले सहयोग नै गरे पनि समाजले कहिल्यै राम्रो नजरले हेर्दैन । मलाई पनि घरदेखि समाजले सबैले शुरूमा यस्तै भन्ने गर्थे । राम्रो कसैले पनि भन्थेनन्, तर आफूले हार नमानेर मेहेनत गरेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि सफल भइन्छ ।
काम गर्न ठूलो पर्दामा सजिलो कि म्युजिक भिडियोमा ?
म्युजिक भिडियोमा टिम सानो हुन्छ । थोरै समयमा सकिन्छ र नतिजा छिट्टै पाइन्छ । ठूलो पर्दामा भने जिम्मेवारी पनि ठूलै र समय निकै लाग्छ । अभिनय सँगै ‘डाइलग’ बोल्नुप¥यो । म्युजिक भिडियोमा डाइलग बोल्नु पर्दैन । तर फिल्म भनेको त टिम नै ठूलो । अलि गाह्रो पनि छ, फिल्म गर्न ।
कसको प्रेरणाले यहा“सम्म आइपुग्नु भयो ?
मलाई यहाँसम्म पु¥याउनको लागि मेरो मम्मीले मलाई धेरै मद्दत पु¥याउनु भएको छ । एक पटक बाजुरामा ‘डान्स’ सिक्न जाँदा म सँग १ सय ५० रूपैयाँ नहुँदा मेरो मम्मीले मलाई आफूले खाइनखाई गरेर पैसा दिनुभएको थियो । घरपरिवारमा बाबा–मामाहरूले मलाई यो क्षेत्र राम्रो होइन, बिग्रेको मान्छे मात्र यसमा लाग्छन् भन्ने जस्ता कुरा गर्नु हुन्थ्यो तर मम्मीको सहयोगमा म यहाँसम्म आइपुगेँ । तर अहिले भने सबैले बुझ्नु हुन्छ यो क्षेत्र राम्रो रैछ भन्नु हुन्छ । राम्रो छ, काम गर भन्नु हुन्छ । मलाई यहाँसम्म आइ पुग्न अभिनयमा मेरा आदरणीय गुरूहरू उत्तम शर्मा र जितेन्द्र ढकाल, नृत्यमा कुलमान नेपाली, चन्द्र मन्दिर साथै मलाई काठमाडौंमा सबैसँग चिनजान गराइदिने हरि विष्ट र राजु केसी दाईहरूले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ ।
कतिपय नायिकाहरूको नाम निर्देशकस“ग जोडिएको हुन्छ तपाईंको अहिलेसम्म कसैस“ग नाम जोडिएको छ कि छैन ?
त्यस्तो हुन्छ कतिपय नायिकाहरूको निर्देशकसँग ‘रिलेसन’ छ भन्ने सुनिन्छ । तर मेरो नाम भने अहिलेसम्म कसैसँग जोडिएको छैन । त्यो त आफ्नो आफ्नो इच्छा हो कतिपयले आफू चर्चामा आउनको लागि आफ्नो नाम निर्देशकसँग जोड्ने पनि गर्छन् । तर चर्चामा आउनको लागि निर्देशकसँग नाम नै जोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने यदि आफू लगनशील, मेहेनत भएर लाग्यो र आफूमा क्षमता छ भने कसैसँग नाम जोड्नु पर्दैन आफै चर्चामा आउन सकिन्छ । यस्तो धेरै जसो नयाँ आउने कलाकारहरू नै परेका हुन्छन् । उनीहरू यो क्षेत्रमा आउनु अघि नबुझेर आउँदा यस्तो हुने गर्छ । अनि जो व्यक्ति पैसा कमाउने उद्देश्यले यो क्षेत्रमा आउँछ त्यो व्यक्तिले नै यस्तो काम गरेका हुन्छन् उनीहरूका कारण एउटा असल कलाकार माथि पनि प्रश्न चिह्न खडा हुने गर्छन् ।
म पनि पैसा कमाउने उद्देश्यले यो क्षेत्रमा आएको भए सायद मैले पनि यस्तै भोग्नु पथ्र्यो होला म त एउटा अडिसनबाट मेरो खुबी र क्षमताका कारण कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर पाए । त्यस कारण अहिलेसम्म म कसैसँग पनि चुक्नु परेको छैन । र सफल पनि भएकी छु ।
तपाईको विचारमा पे्रम के हो ?
मेरो विचारमा पे्रम भनेको जीवन जिउने आधार हो । पे्रम यस्तो चिज हो, जो कि नचाहँदा नचाहँदै कसैसित हुन्छ । तर कसै कसैले प्रेमको दुरूपयोग गरिराखेका हुन्छन् । पे्रम कै कारण कसैको जिन्दगी बनेको हुन्छ त कसैको जिन्दगी बर्बाद पनि भएको हुन्छ । पे्रमको सहि सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ ।
कसैको प्रेममा पर्नु भएको छ कि छैन ?
हा.हा.हा… अहिलेसम्म त कसैको पे्रममा परेकी छैन । तर म कक्षा ८÷९ मा पढ्दा भने कसैलाई मन पराउथेँ । आफूले देखे रोजकोे जति सबै पाइदो रहेनछ ।
मेरो भावी योजना भन्नु पर्दा काठमाडौंमा एउटा घर बनाउने लक्ष्य लिएकी छु र फिल्म क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गराउने र एउटा सफल कलाकार बन्ने योजना छ ।